Sidee si ay u wadaagaan / wareejiyo playlists dhexeeya Spotify iyo Deezer
Sidee si ay u gudbiyaan Playlists u dhaxaysa Spotify iyo Deezer (Share Playlists)
Spotify iyo Deezer Labada leeyihiin taageerayaasha weyn oo sidaas daraaddeed tareenka wareejiyo ka mid adeeg kale oo ay la isticmaalayo habab caadi ahayn oo labada shirkadaha adeegga marnaba ansixin. User ayaa wali isticmaala oo keliya ma aha habkan laakiin waxay sidoo kale waxaa laga heli karaa in ka badan internet-ka oo qoto dheer si wanaagsan u isticmaasho ilaha la dhisay oo wuxuu u bixiyey. Si aad u heshid waxa ugu fiican oo ka mid ah adeegyada waxaa lagula talinayaa inay raacaan tutorial si ma aha oo kaliya habab cusub oo lacag la'aan ah si ay u qabtaan shaqada sakhiray yihiin sahamiyey laakiin user sidoo kale helo gaadhista taas oo kale ma laha. Waxaa xusid mudan in ay jiraan tobanaan kun oo siyaabo ka mid ah oo ahaa saddexda ugu sareeya ayaa la soo bandhigi doonaa.
part1: Maxaad kala iibsiga ayaa loo baahan yahay?
part2: Siyaabaha ee la wadaago ama u dhexeeya adeegyada sheegay in wareejinta playlists ah
part3: Isticmaal Wondershare TunesGo in la ogaado oo kala soo bixi music
Maxaad kala iibsiga ayaa loo baahan yahay?
Waxaa jira sababo dhowr ah si aad u hesho socda soo wareejinta. Ayaa dood ugu sheegay waa in Deezer waa adeeg ah in aan la heli karin in USA si fanaaniinta ee dalka ma heli karo meel dhawaaqa in indhaha u user Deezer. Ka hortag Spotify ee aan taageerayn uun laakiin sidoo kale ka wakiil ah fanaaniinta USA ku salaysan in ay leeyihiin taageerayaasha weyn adduunka oo dhan. Sidaas daraaddeed Isticmaalka hababka sharci darrada ah kama dhigi doonaa oo kaliya user Deezer ah ka war habka laakiin sidoo kale ha doonaa inay ku raaxaystaan ​​heesaha oo aan adeeg ma ogola in iyaga. In la wadaago iyo playlists kala iibsiga u dhaxeeya adeegyadan user u baahan yahay in la xasuusto furka sare ama xadka playlist heesta Deezer ayaa codsatay.
The playlists Spotify in uu leeyahay wax ka yar 400 oo heesaha oo kaliya in la keeno karo halka ma jirto xadka sida ku saabsan qayb ka mid ah Spotify. Hababka in halkan lagu kana soo adeegyada ku jira su'aal oo sidaas ogolaanaya user si loo kordhiyo ururinta music la qasabno oo kaliya dhowr gudbin doona tareenka. Warkii wanaagsan oo dheeraad ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Deezer waa in Deezer ayaa la qorsheeyay in aan bilowno adeegga ee USA ee 2016. taariikhda rasmiga ah aan la xaqiijiyay iyo kuwa ku xusan online yihiin wararka Diintooda. Marka adeegyada la bilaabay markaas user ma laga yaabaa in ay isticmaalaan habab haddii labada shirkadaha shaqeeyaan. Laakiin tani waa mid ka mid Dhanka kale warar sideeda ah. Haddii ay jirto wax Deezer kasoo horjeeddo Spotify arrin markaas taasi ma dhici doono.
Siyaabaha la wadaago ama wareejinta playlists u dhexeeya adeegyada yiri
Ugu sareeya saddex dariiqo oo loo adeegsan karo in dajiyaan heeso ka Spotify in Deezer iyo qeybsanaan ayaa lagu sharaxayaa sida hoos. Tani waxay sidoo kale kuu sharxi lahayd in deezer Spotify v arrin jirin kulan ah dadka isticmaala ee maanta.
Isticmaalida habkan waa mid fudud oo keliya, laakiin waxa ay sidoo kale siisaa tiro balaadhan oo ah doorashooyin. Isticmaalka habkan loo hubiyo in kala iibsiga u dhaxeeya video ugu weyn iyo, geeyo iyo goobaha marti loo sameeyaa in aad u fudud oo ilaa hab taariikhda. Bogga internetka ee taageertaa, YouTube, Dailymotion, Deezer, Spotify iyo liiska iyo tagaa. Si aad u hesho natiijooyinka waafaqsan shuruudaha waxaa lagula talinayaa inay raacaan nidaamka hoos ku xusan:
1. The URL sida http://soundiiz.com/#/converter waa in ay soo booqdaan si ay u bilaabaan habka:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in login Spotify iyo sidoo kale xisaabta Deezer labadaba, website-ka la isugeeyey user u websites rasmi ah si aad u dhamayso login mar xidhmaan Spotify iyo xidhmaan badhamada Deezer waxaa lagu dhuftay:
3. Marka xisaabaha soo qortey in playlists lagu soo bandhigi doonaa oo user xaqa u baahan yahay inuu iyaga kaxayn meesha loogu tala galay website-ka. Wareejinta waxaa sidoo kale kala iibsiga waxaa loo sameeyaa by website-ka si ay u wadaagaan playlists ka dhexxeeya adeegyada aan arin kasta oo tan ayaa sidoo kale dhameystiray habka Dhameystiran:
Habkani waa ka sii dhib yar marka la barbar dhigo mid ku xusan. Waxa aanu u baahan user ah inay la soo wareegto akoonka Spotify ah. Ka hortag oo kaliya URL playlist ah ayaa loo baahan yahay si ay u qabtaan hawsha. User wuxuu u baahan yahay oo kaliya u baahan yahay in la raaco habka uu soo hoos ku xusan si aad u hesho natiijooyinka la doonayo in ay yihiin. Waxa kale oo ay u doonaynin inuu user ku wareejiyo ku playlists in la siiyaa in xisaabta marka ay abuureen database Spotify sida dhisay playlists. Geedi socodka dhamaystiran waa sida soo socota:
1. user wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan URL http://spotizr.com/ in ay kiciyaan nidaamka:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in nuqul oo paste URL playlist Spotify in ay bar loogu talagalay ujeeddo oo isku mid:
3. button dejinta ayaa markaas waa in la riixi si user waxaa lagu wareejiyey Deezer page login halkaas oo dhan aqoonsiga ah waxaa la siiyaa si ay u gasho in ay sii wadi:
4. Marka user login playlist waxaa si otomaatik ah isku badali doono oo la soo bandhigi doonaa in account Deezer iyo tan ayaa sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa.
Habka Mooval ayaa
Mooval sidoo kale waa website kale u saamaxaya in ay playlists ka wareejiyo Deezer in Spotify iyo qeybsanaan ku xigeenka. User xaq u baahan yahay in la raaco habka fudud in lagu Xusi, sida soo socota si aad u tegayaa natiijada ugu wanaagsan ahbaa oo aan wax arrin oo dhib. Dadka isticmaala UK ku salaysan ee deezer vs. Spotify UK fikrad mar dili lahaa habkan waxaa la socda:
1. URL ayaa http://www.mooval.de/ waa in uu booqday si loo bilaabo nidaamka:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in Riix xirmaan in la sii wado in arrintan la xiriira:
3. website The la isugeeyey user u websites rasmi ah Deezer iyo Spotify si aad u hesho socday oo mar user waxaa qortey playlists ee la soo bandhigi doonaa oo markaas ayaa loo gudbin karaa adigoo riixaya >> ama << badhamada iyo tan dhameystiray nidaamka ku buuxa:
Isticmaal TunesGo Wondershare in la ogaado oo kala soo bixi music
Waa kuwan qaar ka mid ah muuqaalada TunesGo Wondershare in ka codsanayaa user lagu sameeyo software default ee hawlaha aan la socon music la xiriira:
Waxa ay taageertaa madal kasta oo waawayn oo caalamka, taasi oo ah mid ka mid mobile ku salaysan ama computer ku salaysan oo ku wareejinaya content ugu muuqan.
Tags ID3 ayaa sidoo kale ka mid ahaa in ay heesaha oo marka la wareejiyo oo isticmaalaya barnaamijkan taas oo muujinaysa waa software ugu caqliga
Maktabadda Lugood The aan xannibaad kasta oo lagu keeno karo, abaabulay oo lagu hayo isticmaalaya barnaamijkan ugeeyaan.
Barnaamijka ayaa iskaan karaa maktabadda oo ka dhigi kartaa sixitaan loo baahan yahay in ay yihiin si ay u dhameystiraan baaritaan maktabadda iyo inay ka sameeyaan ilaa sumaddii.
Hal mar ayaa qiimaha iibka ee barnaamijka waxa ay mudnaan gaar ah nolosha oo dhan ah ammaanka iyo sidoo kale updates feature lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Habka la raaco in la ogaado iyo download music waa sida soo socota:
URL ayaa http://www.wondershare.com/tunesgo/ waa in ay soo booqdaan si loo soo dajiyo iyo abuurtaan barnaamijka si loo bilaabo nidaamka:
Jidka in uu yahay in la raaco waxaa laga heli karaa in bar bidix iyo waa heli music> download,
URL YouTube waxaa markaas in la dhejiyo in la sii wado iyo badhanka download waa in la adkeeyey,
Download song wuxuu bilaabi doonaa sida bar socdo iyo tan ayaa sidoo kale ku eg yahay geeddi-socodka soo degsado gabayadii jecel isticmaalaya codsigan cabsi badan:
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Android inay Lugood
Qaar ka mid ah Meelaha ugu fiican si aad u iibsato Gitaarka Online
> Resource > Music > Sidee si ay u gudbiyaan Playlists u dhaxaysa Spotify iyo Deezer (Share Playlists)